Pitching Blogger - Ruzhinji Hukama
Mugovera, July 13, 2013 Chitatu, Nyamavhuvhu 13, 2014 Douglas Karr
Ini ndakagamuchira iyi email kubva kune yeruzhinji hukama nyanzvi kuti ndione kana ndaizobloga nezve mutengi wavo pane iyo Martech Zone. Iyi ndiyo email yese, inoteverwa neruzivo rwekufona uye nhamba yefoni.
[Zita reMutengi] iri kuwedzera bhizinesi rayo repasi rese uye masevhisi nekuwana iyo UK-based multimedia sevhisi svondo rinouya, ichiwedzera kusimbisa tsoka yayo yepasi rose nekusvika kumisika nyowani.
Kubudikidza nekutora uku [Zita reMutengi], rinozivikanwa nekugadzira zvisingaenzaniswi multimedia zviitiko zvemakambani pasirese, zvichatangisa mumusika weEuropean kusimbisa kambani yekambani mutengi kutsigira muEurope, Middle East, Africa neIndia. Parizvino iri kutsigira nhepfenyuro nhepfenyuro muzvitoro, pamhepo uye pachigadzirwa munyika makumi manomwe, [Zita reMutengi] inoshandira vatengi vakaita saStarbucks Coffee®.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota ona Bhizimusi Wire kuburitswa [Batanidza].
Ungave uchifarira kunyora nezve kutsvaga kutsva kwe [Zita reMutengi]?
Nguva yeanodiwa ruzhinji hukama hweveruzhinji nyanzvi:
Kutanga… nehunyanzvi iyi SPAM inotyora chiito cheCAN-SPAM. Uri kundikumbira uye hausi kupa nzira yekuzvinyora muemail yako (sezvo wakazvivanza seemail wega). Handina hukama hwebhizinesi newe, uye handina kana kumbove nehukama newe.
ndine handizive ndiani mutengi wako kana kuti nei ndichifanira kunyora nezvavo. Kungonyora zita ravo hakundipe chero ruzivo mukambani yavo, zvigadzirwa zvavo kana masevhisi avo.
Iwe hauna kundiudza ivo varikutenga. Ndeupi mupi webasa? Nei ichikosha kune vateereri vangu?
Usanditumire chinongedzo chekutsvaga rumwe ruzivo. Nguva yangu yakakosha. Ndiudze kuti sei nhau idzi dziri kunyanya inoenderana neyangu blog uye vateereri vayo.
Ndiudze zvaunoda kuti ndinyore nezvazvo uye zvinyorwe kune vateereri vangu.
Sanganisira mifananidzo kana mavhidhiyo angangoshanda kune iyo nyaya yekuti ini ndigovane.
Ipa zvinongedzo zvaungade kuti ndigovane nevaverengi vangu izvo zvichavapa nerumwe ruzivo.
Regedza kuita husimbe uye iwe unogona kuwana zvimwe zvirinani zvibereko. Zviri pachena kuti email yako yaingove yakatemwa uye yekuisa iyo iwe yaunongoerekana uchitumira kune vakawanda mabloggi. Zvimise. Verenga chinyorwa changu pa Maitiro Ekukanda uye Kufuridzira, Blogger kana Mutori wenhau kuona kuti zvinoitwa sei!
Tags: yakaipa pr pindablogger panican-spammutori wenhaupitchprhukama hwevanhumienzaniso yehukama neruzhinjiparuzhinji hukama pombihukama hunotyisa hweveruzhinji
Spundge: Kubatana Kwemukati Kuratidzira kweTimu
Zvakandipa kuseka sezvo chinhu chekutanga chakauya mupfungwa dzaive SPAM. Iwe waizofunga kuti kana iwe uchida kuti mumwe munhu anyore nezvako kana kambani yako iwe waizopa iye munhu ruzivo rwakawanda sekudikanwa kuti uve neruzivo rwekuti chii chiri mubato. Sezvo izvi zvichitaridzika sefomu meseji zvinogona kunge zvakatumirwa kune vamwe vazhinji vanhu vachibvunzwa zvakafanana chinhu. Sezvandareva zvakandiita kuseka. Thanks nazvo.
Aug 25, 2014 na5: 30 PM
Hahaha! Hukuru! Ndatenda nechirangaridzo b / c ini ndiri muvambi uye kwete nyanzvi yekushambadzira 🙂